Action lalao ho an'ny ankizilahy - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Anisan'ny tombontsoa maro samy hafa ny ankizilahy milalao faritra sy maimaim-poana ho an'ny ankizilahy RPG lalao izay aseho an-tserasera, dia tsy mitana ny toerana farany. Eto dia afaka hilalao, sary an-tsaina ny tenany ho superman, ny Knight, ho mpanapaka, ho mahery fo ny sarimiaina sy hankatò ho ny voninahitry ny mpanjaka, vehivavy tsara tarehy. Hamakivaky ny toerana, fa tsy tsy misy fifandonana amin'ny mpanohitra, fa koa ny famoriam-bola ny asa tanana mba hahatsiarovana. Dia hitondra ny fotoana sy ny fiainam-baovao dia manana toetra mampiavaka mahasoa eo amin'ny vatana, tsy hita maso mahatonga anao nandritra ny fotoana kelikely, na tsy mety maty.
Adam N Eve 8 Ny fitiavan-tena
Adama sy Eva: Adama ilay Fanahy
Adama sy Eva 7
Adama sy Eva: Zombies
John, ilay piraty
Lalao Online Rehetra Action lalao ho an'ny ankizilahy
no manasa anareo ho amin'ny Action, dia fantatsika tsara fa ianao no andrasana ho tantara sy niainany tany am-boalohany izay ho asa mampidi-doza sy sarotra. Games ho an'ny ankizilahy Action lasa toerana tena tianay ny tanora izay mitady mafy ny fihetseham-po sy tsy matahotra ny olana.
Ny toetra fototry ny lalao ho an'ny zazalahy Action
rehetra ny lalao izay tsy maintsy hitondra lavidavitra, ary hifindra amin'ny ambaratonga, an'ny sokajy ity. Mety ho miaramila am-pilaminana tanteraka kilalao na tari-dalana. Ao amin'ny Mazava ho azy fa ny zava-nitranga mba manao kilalaon-tsaina, handresy ny Misafotofoto, hanangona zavatra ary hamaha kaody. Izany rehetra izany dia mahatonga ny gameplay mahaliana, manan-karena, samihafa.
Aiza no lalana lalao Action
Ireo dia lavitra be herim-po dia tsy matahotra ny hiala-dalana sy ny loza. Ala mihitsy aza izy ireo, mafana sy tsy manam-petra efitra, Feno tahotra lalantsara ny fasana mampatahotra, indrindra fa raha misy mpiara-miasa, izay delish fifaliana sy ny fahoriana. Sariitatra litera, boky tantara an-tsary, sarimiaina, manga, ary isan-karazany ny kilalao solosaina mba mavitrika mandray anjara amin'ny fiakaran'ny mampidi-doza, ka manasa anao ho eo amin'ny orinasa. Miaraka, ianao dia handalo ny lalana mbola tsy fantatra i mandraka ankehitriny, mianatra mieritreritra lojika, mba ho mandinika sy mampihatra ao amin'ny asa tanana hita. Indraindray dia sarotra ny sary an-tsaina ny lalana izay hitarika manaraka, na izay vaovao manaraka indray. Characters mahafinaritra indrindra hiseho eo imasonareo sy Miantso ny lalana. Na dia lalao ara-politika dia tsy afa-bela ny tontolo virtoaly, ary ny ankizy tsy manan-tsafidy toy ny handray anjara amin'ny teti ny mahery.
Ny handeha hiaraka be herim-po mahery fo
US Filoha – Obama dia miatrika angano litera « Alice in Hafakely » ary raha ny bitro nitodika tany aminy mba hahazoana fanampiana, dia tsy mandà sofina. Mba hamonjena Alice ny fonja, fa ilainareo izany rehetra ny fahefany mba hanova olona nalaina ny fanapahan-kevitra. Mahazo ny herin'ny maizina ny tany, dia mandeha amin'ny lalana izay tsy nisy olona lasa teo aloha, miresaka amin'ny hafa litera ka mahafantatra izay zavatra mba handray azy amin'ny manaraka. Miaraka fluffy biby goavam-be azonao any amin'ny herin'ny maizina ny tany, fara fahakeliny, – Konfetolandiyu. Misy zava-mamy maro izay tsy misy olona ao an-doha dia tsy tonga mangataka vola ho an'ny zo overeat azy. Afaka mandray amin'ny tsy mampino vola, raha mbola ny tummy tsy harary, ary ny nify tsy niharatsy. Nirenireny ny alalan 'ny fanampiana be dia be izany mba ho ny maha lilac mamy tampon, mitsambikina niakatra sy nidina teo amin'ny sehatra indray taty aoriana. Na biby matevim-blob avy amin'ny sekoly boky fampiasana ho velona, ​​ary nanapa-kevitra ny mandentika ao an ny dia amin'ny alalan'ny ny pejy ny tetrad manangona fanairana. Dia nifoha maraina mandroso, tsara, ianao manampy azy mba hahita ny varavarana amin'ny ambaratonga vaovao ny lalao. Super Mario sy Sonic ny sokina – Zavatra tsy mahazatra solontenan'ny brodilok. Rehefa avy nandany ora maro tamin'ny antokony, efa manana hevitra momba ny hafa rehetra lalao vokatra amin'ny tari-dalana ity. Madinika fiovana ao ny tsipirian'ilay, ireo lalao dia tsy tena mitovy amin'ny samy izy. Na aiza na aiza misy maro ny asa sy ny tanjona farany ny misaraka-naka ambaratonga sy ny lalao amin'ny ankapobeny. Afaka mandeha any amin'ny vanim-potoana Moyen Âge sy ny ady amin'ny dragona, nandrora afo, mba hanafaka tany am-ponja mba hamonjy ny andriambavy na ho mpanjaka. Ny foto-kevitra Piraty dia hisarika ny fomba aman-toetra sahisahy maniry mafy ny hiavian'ny loza sy ny fihetseham-po.
Ny versatility brodilok
Ny famoronana vokatra ho an'ny mitovy taona sy ny genders, dia manasongadina lalao ho an'ny ankizilahy RPG, izay matetika nandritra ny andalan-teny mampiseho singa ny mpitifitra. Sary kilalao dia namoaka na inona na inona manokana, ary ny gameplay Tsotra sy tsotra. Fa izao kosa no singa no RPG manintona sy mora tanterahina. Dia azo alaina na nilalao aterineto, ary koa ny mba hametraka amin'ny finday, ary izy ireo mora ny mihazakazaka.
Ao amin'ny ampahany ny ankizilahy 'ity lalao amin'ny dingana ny lalao ao amin'ny batery mitarika shooter Genre. Teknolojia efa nanao lalao ho tsara tarehy telo voalohany singiolary ny mpandefa zana, toy izany koa ny ankizilahy tamim-pifaliana vokany ratsy eo mandeha ho azy jatony virtoaly toeram-pivarotana, mitifitra ho samy hafa biby goavam-be sy ny fahavalo. Ny lalao indostrian'ny dia fanatitra mpilalao goavana maro samihafa safidy – avy tsotra mpitifitra amin'ny tontolo lehibe amin'ny be dia be ny karatra sy sampana storyline. Ny zava-tsoa, ​​ny teknolojia maoderina, toy ny Flash, mamela anao mba hamorona lalao avy rangotra, ratra kely. Ankoatra izany, manao izay ahafahantsika tselatra, miaraka amin'ny hafanam-po noho ny olana tsy misy mianatra ny fomba hamoronana lalao tsotra. Noho izany, ny tsena manome brodilok nampitombo. Raha ny foto-kevitra momba Action dia tsy ofisialy. Mpandraharaha tia marina kokoa ny fanasokajiana, toy ny Arcade na platforming. Noho izany, dia misy ny sasany fanitarana ny Genre fetra. Izany dia manaraka avy fifangaroana io sahady. Ohatra, ny lalao momba ny miaramila handeha eo amin'ny sarintany sy ny mitifitra ny milina basy tao ny fahavalo, dia afaka ny ho RPG, sy fitifirana lalao.
toy izany diso fizarana lalao azo lazaina fa ny ankamaroan'ireo lalao « mihazakazaka-nitsambikina-tsimoka » ny endrika brodilok. Tamin'ny toerana www. lalao-lalao. fr. ua dia hahita be dia be ny lalao video-brodilok. Ny maro amin'izy ireo dia afaka, noho izany dia aza misalasala ny milalao na swing misy lalao ireo. Ny famoriam-bola dia natao manokana mba olon-drehetra dia afaka mahita ny toerana tena RPG. Miezaka isika ny hamorona amin'ny zorony ao amin'ny tambajotra, izay ahitana ny ambony indrindra ho isan'ny lalao maimaim-poana.